तर, उनीहरू सफल भईछाडे – आफ्नो प्रेरक संसार
Bibas Kulung — १६ बैशाख २०७८, बिहीबार ०८:४९0comment
१. ज्याक मा ३० पटक अस्वीकार भएका थिए
चीनको एक गरिब परिवारमा जन्मेका ज्याक माले अंग्रेजी शिक्षकको रुपमा आफ्नो करियरको सुरुवात गरेका थिए । त्यसअघि उनलाई ३० रोजगारदाताले अस्विकार गरेका थिए जसमध्ये एक केएफसी पनि थियो ।
कम्प्युटिङको कुनै पृष्ठभूमि नहुँदा समेत ज्याक माले दुई दशकअघि आफ्नै अपार्टमेन्टमा अलिबाबालाई जन्माए । उनी आफै सामान्य आर्थिक स्थितिबाट गुज्रिएको परिवारमा हुर्किएका हुन् । त्यस्तो व्याक्तिले एकदिन यसरी खर्बपती हुने गरी सफलता प्राप्त गर्ला भनेर कसैले सोचेकासम्म थिएनन् ।
७. एरिएना हफिङटन ३६ वटा प्रकाशकबाट अस्विकृत भएकी थिइन्
प्रेरक प्रेरक कथा महान कथा महान भनाईघ राम्राे भनाई सफकताकाे कथा सफल कथा सफलता